I-16 / 11 / 2019 | RayHaber | raillynews
Usuku: Novemba 16, 2019
I-TCDD yoVavanyo ngokubanzi kunye noMasifundisane oQalileyo; Ukuvavanywa kwe-CD ngokubanzi kunye neNdibano yokuFundela iFenerbah kwi-TCDD Fenerbahçe yoQeqsho kunye neNdawo yokuPhulaphula iqale phantsi konyulo loMphathi Jikelele we-TCDD u-Ali İhsan Uygun. Republic of Turkey [More ...]
IZiko leSikolo saseKeltepe kunye nePhuli ye-Eğriova Phantsi koPhononongo
Irhuluneli yaseKarabük uFuat Gürel, ekunye namaphini bafumana uphando lweKeltepe Ski Centre Egriova Pond. I-Governor Fuat Gurel, amasekela kaKarabuk uCumhur Unal, uNokwazi Gunes kunye noGqr. UHüseyin Avni Aksoy, iPhondo Jikelele [More ...]
Ukufika kwe-YHT, inani labakhenkethi eSivas liya kunyuka liye kwi-3
Ukufika kwe-YHT, inani labakhenkethi eSivas liya kunyuka liye kwi-3; Ukundwendwela kunye nokuphanda kusuku kusuku olungaphambi kokuba uMongameli weNdlu yeeNdibano eziSizwe zaseSivas. Dr. UMustafa Şentop, Uloliwe oMagqabini, oya kusebenza kungekudala. [More ...]
Impendulo kuMmiselo we-TCDD: 'Baza kuqhubeka nokufihla abo baXabisekileyo'
ICandelo loMphathiswa Wezothutho lilungiselele ummiselo omtsha emva kwenani elandayo leengozi ezibulalayo kuloliwe kwiminyaka eyadlulayo. ICandelo loMphathiswa Wezothutho lilungiselele ummiselo omtsha emva kwenani elandayo leengozi ezibulalayo kuloliwe kwiminyaka eyadlulayo. [More ...]
Isilumkiso sokuHlala ngeNdawo esiPhilayo esivela eMetro Istanbul!
Ukwenza iVidiyo kwiSmile e-Istanbul Metro; UMetro Istanbul, umdibanisi kaMasipala wase-Istanbul Metropolitan, wabelane ngengoma kwiakhawunti yeendaba zosasazo esithi ayifanele “isasazeke ında kwizithuthi zikawonkewonke. Yabiwe kwi-akhawunti esemthethweni ye-Metro Istanbul [More ...]
I-Ajenda Trabzon Railway eTSIAD; I-Trabzon Industrialists kunye ne-Business People Association yebhodi yomhlangano weveki yeTrabzon Erzincan Ilungu lePlatfomu, u-Ortahisar kunye nelungu leBhunga likaMasipala weMetropolitan u-Mustafa Yaylalı. Umongameli we-TSİAD [More ...]
Iikhosi zeTekhnoloji zeTCDD ziya kuvulwa kwakhona; I-21 kaFebruwari i-2018 yavula kwaye yafumana umdla omkhulu kwiCandelo Jikelele leTCDD yezoThutho Inc. yimfuno yokuvulwa kwakhona kwekhosi yesifundo [More ...]
Young oosomashishini Association of Turkey (TUGIAD) USihlalo Anil Alirıza Şohoğl afumaneka ingcaciso amanani edizwe TSI. Ngokutsho Turkstat eTurkey naphezu 15 2019 iminyaka yobudala kwi inani abangaphangeliyo Agasti [More ...]